ALBOHES Z5 စက်ရုပ်ဈေးနှုန်းမှစက်ရုပ် ၀ င်းဒိုးသန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ်
အစအိမ်စက်ရုပ်သန့်ရှင်းရေး ALBOHES Z5 စက်ရုပ်ပြတင်းပေါက်
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်မတ်လ 2020,47:12 pm တွင်
စျေးနှုန်းသမိုင်း ALBOHES Z5 စက်ရုပ် Window Glass ကို Cleaner မှာ Automatic သန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ်
€ 144,22 - 2019 10 ဒီဇင်ဘာ
€ 150,28 - 2019 22 နိုဝင်ဘာလ
€ 130,20 - 2019 12 နိုဝင်ဘာလ
မှ: နိုဝင်ဘာလ 2019, 12
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 150,28 - 2019 22 နိုဝင်ဘာလ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 130,20 - 2019 12 နိုဝင်ဘာလ
ALBOHES Z5 စက်ရုပ် Window Glass ကို Cleaner မှာ Automatic သန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ်
Dream ရုံး Tech မှ: စက်ရုပ် Glass ကို Cleaner
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: စက်ရုပ်သန့်ရှင်းရေး ALBOHES Z5 စက်ရုပ်ပြတင်းပေါက်
1 X Window Cleaner စက်ရုပ်, 1 x ကိုရေမှုံရေမွှား Bottle သ, 12 သန့်ရှင်းရေးအဝတ်အစား, 1 remote control x x, 1 ပါဝါ Adapter ကို, 1 AC Power Cord သည် x x, 1 DC ကပါဝါတိုးချဲ့ Cable ကို x, 1 4M အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကြိုး x, 2, သန့်ရှင်းရေး Ring ကို x အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x ကို 1
စက်ရုပ်ဗီဒီယိုများသန့်ရှင်းရေး ALBOHES Z5 စက်ရုပ်ပြတင်းပေါက်
အဘို့အ6ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း စက်ရုပ်သန့်ရှင်းရေး ALBOHES Z5 စက်ရုပ်ပြတင်းပေါက်
CJ Nejedlý - 2019 10 ဇွန်
သာလှေကားကို အသုံးပြု. သန့်ရှင်းရေးမရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ပြတင်းပေါက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ငါစက်နေစဉ်သန့်ရှင်းရေးပြတင်းပေါက်တချို့စက်ရုပ်ရှာဖွေနေခဲ့သည်။ မဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှု၏တွေအများကြီးနဲ့ဒါခက်ခဲရှိပါတယ်။ ငါကအနည်းဆုံး 10bdifferent အပေါ်ထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းသည်အထိပိုင် Amazon။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနှင့်အတူအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များဤကြောင့်ရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ငါသည်ဤဝင်းဒိုးကိုစက်ငါ့ကိုစိတ်ပျက်မပြုခဲ့ကံကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဒါပေမယ့်ငါ့ကိုအံ့အားသင့်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်အထုပ်အပြီးအပြည့်အဝကိုအားသွင်းရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အပြည့်အဝဖြင့်တရားစွဲဆိုပြီးနောက်, remote control တို့ကပြတင်းပေါက်သို့မဟုတ်ဖန်တံခါးကိုအပေါ်ထားတော်မူ၏။ ဒါဟာသန့်ရှင်းရေးအတွက်အလွန်အံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ တက်ဆင်းရှေ့ဆက်နဲ့နောက်ပြန်၏ remote-control ဦးတည်ချက်။ ဒါခက်ခဲခဲ့ပါတယ်နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်အများအားဖြင့်, ငါတစ်ချိန်ကတစ်နှစ်ပြတင်းပေါက်သန့်ရှင်း။ ဒီစက်ရတဲ့ပြီးနောက်, ငါ့သားက remote control ကို အသုံးပြု. ကူညီပေးဖို့ကြောင့်တကယ်စိတ်ဝင်စား၏ယခုအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်ဘူး။ သူအပေါငျးတို့သဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုချစ်တော်မူ၏။ သူကတစ်ချိန်တည်းမှာကစားကူညီရန်နှင့်ပျော်မွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခု Love ပေမယ့်ဘက်ထရီကြာကြာအလုပ်လုပ်စောင့်ရှောက်တိုးတက်နိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ cons
TS-836 240V 50Hz လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမီတာ
LENTION C34HCR Type-HUB Adapter USB-C မှ USB 3.0 4K HDMI Converter သို့
Xiaomi Mijia LCD လက်ရေးဆွဲခြင်းဘုတ်ပြားသေးသေးလေးရေးခြင်း Tablet Peppa Pig Limited Edition
Alfawise HDP300 DLP 1080P 300 ANSI Lumens Smart Mini Projector အိတ်ဆောင်အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံ 7000mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့် Hi-Fi Stereo Speaker Bluetooth
Alfawise HDP300 DLP 1080P 300 ANSI Lumens 7000mAh ပါ ၀ င်သည့်အိမ်သုံးရုပ်ရှင်ရုံ Smart Mini Projector ...
Xiaomi Mijia လေဆာပရိုဂျက်တာ 4K TV
MECOOL KM3 ATV Google Certified Amlogic S905X2 Android Pie 9.0 OS 4K တီဗီ Box Voice Remote Dual Band Dual Band WiFi Bluetooth USB 3.0
MECOOL KM3 ATV Google Certified Amlogic S905X2 Android Pie 9.0 OS 4K TV Box Voice Remote Dual ပါသော ...
MECOOL K7 DVB - S2 - T2 / TC 4GB LPDDR4 64GB EMMC 4K တီဗီသေတ္တာနှစ်လုံးပါ ၀ င်သော WiFi Amlogic S905X2 HDR10 H.265
MECOOL K7 DVB - S2 - T2 / TC 4GB LPDDR4 64GB EMMC 4K တီဗီသေတ္တာနှစ်ခုပါသော WiFi Amlogic S905X2 HDR10 ...
ORICO SC2-BK USB Multi-function Drive-free ပြင်ပအသံကဒ်
Alfawise C10 Pro CNC လေဆာရောင်ခြည် GRBL ထိန်းချုပ်မှု DIY ထွင်းခြင်းစက် Professional Modular မြင့်ပေါင်းစည်းမှု ၃ Axis Wood Router Engraver
Alfawise C10 Pro CNC လေဆာရောင်ခြည် GRBL ထိန်းချုပ်မှု DIY ထွင်းထုစက် Professional Modular မြင့်ပေါင်းစည်းခြင်း ...